पोखराबाट मदन भण्डारीसँगै गाडी चढेका कट्टेल बाटैमा किन ओर्लिए ? फोन गर्ने व्यक्ति को थिए ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
पोखराबाट मदन भण्डारीसँगै गाडी चढेका कट्टेल बाटैमा किन ओर्लिए ? फोन गर्ने व्यक्ति को थिए ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुंगा दुर्घटना प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति हुन् ।
२ जेठमा भण्डारी र आश्रितसँगै पोखरामा एमालेको कार्यक्रममा सहभागी रहेका कट्टेल ३ जेठमा सँगै जीपमा चढेका थिए। तर उनी मुग्लिङसम्म पनि आएनन्। संयोगबस आबु खैरेनीमा उनको पार्टीको र केही व्यक्तिगत काम परेका कारण त्यहिँ उत्रिए। एमालेको छानबिन आयोगले पनि यहि कुरालाई उल्लेख गरेको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘जेठ ४ गते नारायणगढ आउने कमरेडहरूको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अघिल्लो दिन अज्ञात व्यक्तिले मदनसित टेलिफोन गरेपछि परिवर्तन भयो र ३ गते २ बजे उहाँहरु पोखराबाट प्रस्थान गर्नुभयो।’
हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छानबिन आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ,‘पोखराबाट उक्त गाडीमा कमरेड ऋषि कट्टेल पनि चढ्नुभयो। गाडी अघि बढ्यो। पोखरा बजार कट्नासाथ ड्राइभर अमर लामाले कमरेड भण्डारीलाई सिटबेल्ट बाँध्न अनुरोध गरे। उहाँले बाँध्नुभयो। अपरान्ह ४.५५ बजे गाडी आबु खैरेनी आइपुग्यो। ऋषि कट्टेल त्यहिँ झर्नुभयो।’
उक्त आयोगले घटनास्थलमा पुगेर विभिन्न पक्षसँग कुराकानीसहित दुर्घटना भएको ठाउँको अवलोकन गरी निष्कर्शमा भनेको थियो– यो दुर्घटना होइन, हत्या हो।
यसैक्रममा पार्टीमा बुझाईको प्रतिवेदनमा पोखरामा रहेका मदन र आश्रित चितवनको कार्यक्रमका लागि ४ जेठमा नै पुग्ने तय भएको थियो। तर अज्ञात व्यक्तिको फोन आएपछि दुवै जना ३ जेठमा नै पोखराबाट चितवनतिर लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर प्रतिवेदनले अज्ञात व्यक्ति को थिए भन्नेचाहिँ खुलाएको छैन। प्रतिवेदनका धेरै अंशहरु मध्येको यो महत्वपूर्ण अंश यस्तो छ।